चीनलाई दिने गैंडा काठमाडौं ल्याईँदै, उपहारमा दिइयो २६ गैंडा | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
चीनलाई दिने गैंडा काठमाडौं ल्याईँदै, उपहारमा दिइयो २६ गैंडा
असार २६, २०७५ मंगलबार ९:१५:५८ | रासस
चितवन – चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट चीन सरकारलाई उपहारस्वरुप पठाउन लागिएको जोडी गैंडा मंगलबार काठमाडौं पठाइने भएको छ ।
गैंडा यही असार २८ गते चीन पठाइनेछ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत वेदकुमार ढकालले स्थानीय सरोकार भएकाहरुसँग छलफल गरी सबैलाई जानकारी दिएर दिउँसो गैंडा काठमाडौं पठाउन लागिएको बताउनुभयो ।
गैंडालाई चीनसम्म छाड्न निकुञ्जकै वरिष्ठ चिकित्सक डा. कमल गैरे, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका प्राविधिक किरण रिजाल र तीन सहयोगीसमेत पठाउन लागिएको छ । काठमाडौँसम्म गैंँडा छाड्न प्रमुख संरक्षण अधिकृत ढकाल, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष सौराहाका प्रमुख रामकुमार अर्याललगायत जानुहुनेछ ।
२६ गैंडा उपहार
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट विभिन्न देशमा अहिलेसम्म २६ गैँडा उपहारस्वरुप पठाइएको छ ।
निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत वेदप्रसाद ढकालका अनुसार अमेरिकामा ६, भारतमा ४ तथा बंगलादेश, पाकिस्तान, थाइल्याण्ड, म्यान्मार, जापान, जर्मनी, बेलायत र अष्ट्रियामा दुई दुई गैंडा पठाइएको छ ।
निकुञ्ज तथ्यांकअनुसार पहिलो पटक सन् १९८५ मा भारतको दुधुवामा चार गैंडा पठाइएको थियो । पछिल्लो पटक सन् २००६ मा अष्ट्रियामा एक जोडी गैंडा पठाइएको थियो । बाह्र वर्षपछि फेरि अहिले दुई जाेडी गैंडा चीन पठाउन लागिएको हो । यससँगै निकुञ्जबाट पठाइएका गैँडा ३० पुग्नेछन् ।
यसअघि गैंडा पठाएर भारत, म्यान्मार र थाइल्याण्डबाट हात्ती ल्याइएको थियो । निकुञ्जका पूर्वप्रमुख संरक्षण अधिकृत रामप्रीत यादवले गैंडा दिएर भारतबाट मात्र १६ हात्ती ल्याइएको जानकारी दिनुभयो । विभिन्न देशमा सम्बन्ध सुमधुर बनाउनका लागि उपहारस्वरुप जनावर दिइएको उहाँले बताउनुभयो । यसबाट वंश विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ छ ।
निकुञ्जबाटै विभिन्न देशलाई घडियाल र मगर गोही पनि उपहारस्वरुप दिइएको छ । चीनलाई गैँडा उपहार दिँदै गर्दा चीनबाट जेन्ट पाण्डा ल्याउन सकेमा ठूलो उपलब्धि हुने उहाँले बताउनुभयो ।
अन्तिम अपडेट: पुस १४, २०७५
बिहे गराउन पनि विज्ञापन, मरेकाले पनि पढ्छन् विज्ञापन !
कर्मचारीको तलब बढेन, महंगी भत्ता बढ्यो
‘श्रीमतीले उजुरी गर्दा कारबाहीमा परेंँ, अब रक्सी खान्नँ’
चेल्सीलाई हराउँदै म्यानचेस्टर युनाइटेड एफए कपकाे क्वार्टरफाइनलमा
आउँदो विश्वकप क्रिकेटमा पाकिस्तानसँगको खेल बहिष्कार गर्न भारतल...
मणिपुरबाट उद्धार गरिएका १७९ जना नेपालीलाई नेपाल फर्काइँदै
९ वर्षीया छोरी बलात्कार गरेको आरोपमा ललितपुरको गोदावरीबाट ए...
धनगढीकाे त्रिनगर नाकामा नागरिक सहायता कक्ष
बलात्कारको आरोपमा दुई जना भारतीय नागरिक पक्राउ
नक्कली नोट र नोट छाप्ने मेसिनसहित श्रीमान–श्रीमती पोखराबाट पक्राउ
नेपाली महिला अधिकारकर्मी वन्दना राणा राष्ट्रसंघीय कमिटीको उप...
चैतभित्रै स्ववियू चुनाव हुन्छ, कांग्रेसले पनि सहयोग गर्नुपर्‍यो...
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयाेजना : लगानी जुटाउन भारतीय कम्...
चर्काचर्की बैठकपछि अर्थमन्त्रीले भने : अहिल्यै उग्र नबनौँ, ब्याजद...
निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदमा...
संघीय सरकारसँग मुख्यमन्त्रीहरु असन्तुष्ट
विदेशमा रहेका श्रीमानलाई दीपाको ‘सरप्राइज’ !(भिडियाेसहित)
जम्मू–कश्मीरमा अर्को विस्फोट, मेजरको मृत्यु